Snow Tires: Ntọala ọzọ nke wiil ma ọ bụ Akaụntụ Kwa Afọ?
Ụgbọala & Ụgbọ ala Ndozi & Ndozi
Ọ bụrụ na ị na-agba agba taya snow n'oge ọnwa ihu igwe, ị na-eji otu ụzọ abụọ iji gbadaa taya nke okpomọkụ gị maka taya oyi n'oge abụọ. E nwere ndị na-azụ ma na-eme ka ha abụọ na-azụ, azịza ya na-adabere n'ọchịchọ onwe onye maka ọtụtụ akụkụ.
Usoro nke mbụ gụnyere ịzụta ihe ndị ọzọ maka wiil ígwè maka ụgbọ ala gị na ịnwe taya snow na-adịgide adịgide n'elu wiil ndị a.
Ugboro abụọ n'afọ ị ga-agbago n'akụkụ anọ nke ụgbọ ala gị ma ọ bụ gwongworo ma gbanwee wheel na mgbakọ mgbakọ. Uru ndị dị mkpa nke usoro a gụnyere ụgwọ na ihe dị mma. Ịwapụta onwe gị bụ n'efu, ọ dịghịkwa mkpa ị ga-etinye otu awa ma ọ bụ karịa na ụlọ ahịa taya na-echere ụlọ iji mee ya. Nanị ihe dị na usoro a bụ ụgwọ mbụ, nke dị elu karịa na ọ dị mkpa ka ị zụta ihe ntinye nke nchara ígwè iji dinaa taya snow gị.
Ụzọ nke abụọ bụ swap kwa afọ. Naanị ihe ị chọrọ ịzụta na usoro a bụ snow taya onwe ha. Mgbe ahụ, ị ​​ga-agbaji taya snow gị ma kwụ ọtọ na wiil ndị ụgbọ ala gị maka oge oyi, ma nyezie ya ma kwụkwaa taya gị n'oge okpomọkụ na njedebe nke oge snow. Ụlọ ahịa m na-ahụ maka ebe obibi na-akwụ ụgwọ $ 10 maka wiilị maka ịmalite na ịhazi. Ịkwesighi ịzụta ihe ndị ọzọ maka wiil ígwè maka ịnya mgbanaka snow na usoro a, mana ị ga-akwụkwu ụgwọ ọrụ dịka i nwere otu taya nke taya a na-agbadokwa na okpukpu abụọ n'afọ.
Usoro abụọ ahụ nwere uru ha. Ụfọdụ na-arụ ụka na ebe ọ bụ na ị na-enweta oge ole na ole anyị na-agba chaa chaa, ị ga-akwụ ụgwọ ụgwọ ọrụ mgbe ọbụla na-arụ ọrụ mgbe ụgbọ mmiri snow na-agba. Ọ bụ gị ka ị kpebie ihe ị ga-eme. N'agbanyeghi oge ị na-eme, ọ bụrụ na ị bi na mpaghara nke na-ahụ ezigbo snow, oge tụnyere oge ọ bụla ị na-ebi na nchekwa nke ezinụlọ gị.
Taya snow bụ ihe dị mkpa na ezinụlọ anyị.
Ihe Abụọ Maka Ihe Na-adịghị Mkpa na Egwuregwu Ford
Otu esi achọta nsochi oge
Anya na-ekpuchi ọkụ: Azụ Mmiri ahụ na Dashboard gị
Esi eji dochie akara mgbochi gị
Otu esi elebara Job anya
Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ na nkuzi Drum Brakes
Esi esi tinye Taya ma mee ngwa ngwa dozie ọnụ ala gị
Ihe Ị Ga-eme ma Ọ bụrụ na Ụgbọ Mmiri Gị Na Iju Mmiri
Ndi My Catalytic Ntụgharị Bad?
Iji Nchacha ọkụ na-ehichapu Bolts
Nissan Truck High Nsogbu Nsogbu
Otu esi agba aja aja gi ma obu akwa
Ndepụta nke Ndị Mba nke Mba Ụwa
Ọdịbendị nke omenala-Akụkọ gbasara mmekọrịta mmadụ na ndị mmadụ na nkà mmụta ihe ochie
Mahadum Minnesota Duluth GPA, SAT na ACT Data
Mụta nke onye nwere ihe kachasị mma na ntanetị
10 Ndị Meteorologists
Ị Pụrụ Ịkụpụta Mkpụcha ma Gaa Osisi?
Obere akwukwo nke Mgbagwoju anya nke ndi nwere nkwarita na US
Nkọwa nke otu nwoke
Ọ bụrụ na ụgbọala gị ejiri nlekọta nchebe ma ọ bụ ule na-emepụta
Usoro Ọgwụ Na-amalite site na Akwụkwọ Ozi G
Geography nke osimiri Deltas
Saints nke Early Christian Church
Agha Obodo Amerịka: Edmund Kirby Smith
Ha Na-eme Ka Nkume Na-eme
Gịnị Bụ Olam Ha?
Poems Krismas Banyere ọmụmụ Jizọs
Ọnọdụ Volleyball: N'èzí Hitter
Ụzọ Royal nke ndị Achaemenid
Egwuregwu 10 nke Ụmụaka na-ewu ewu na Contemporary
Kedu Kirtan Chants Nwere Ike Isi Gwọọ Obi
Ndepụta nke Ụlọ Akwụkwọ Ọchịchị Na-ahụ Maka N'Ịntanet Maka Ụmụ akwụkwọ Oklahoma, K-12
Ngalaba nke Ọrụ na Nduzi Ọmụmụ Otu
Kedu ka esi ewepụta listi Volleyball Recruiting List
Biography nke Robert Hooke
Ịghọta usoro egwu okporo ụzọ